Raad Raac News Online – Weeraro Argagixiso oo Xalay lagu qaaday Magaalada Paris”Sawiro”
Weeraro Argagixiso oo Xalay lagu qaaday Magaalada Paris”Sawiro”
Muqdisho November 14, 2015 Comments Off on Weeraro Argagixiso oo Xalay lagu qaaday Magaalada Paris”Sawiro”
Waxaa la rumeysan yahay in weerar is qarxin ah uu ka dhacay banaanka garoonka kubada cagta ee Stade de France, sidoo kale waxaa la soo warinayaa in ugu yaraan 80 ruux ay ku dhinteen masrixiyada Bataclan oo ku taal bartamaha magaalada Paris.
Madaxweynaha Faransiiska ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah, isagoo amray in la xiro dhamaan xuduudaha dalka Faransiiska, waxaana durbaba soo baxaya cambaareyn madaxda Caalamka u jeedinayaan weerarkaas.
Ilaa dhowr goobood oo maqaaxi ay ku jiraan ayay weerarada ka dhaceen, waxaana laga cabsi qabaa in khasaaraha dhimashada uu intaan ka bato.
Dableyda hubeysan ayaa afduub ahaan u qabsaday dad lagu qiyaasay illaa lixdan ruux, waxaana ciidamada booliska ay ku dhaqaaqeen howl gal ay si deg deg ah u soo afjareen, kuna dileen dableydii weerarka geysatay.
Booliska ayaa sheegaya in illaa sideed nin hubeysan ay ka dambeeyeen weerarada, shan ka mid ah ayaa la sheegay inay is qarxiyeen, halka saddex kalena ay toogteen ciidamada booliska.
In ka badan 1,500 askari ayaa loo daad-gureeyay goobaha ay weerarada ka dhaceen ee magaalada Paris, si ay uga qeyb qaataan howlaha gurmadka iyo sugida ammaanka.
Ma jirto cid sheegatay weerarkan, hase ahaatee Faransiiska ayaa sanadkan u ah sanad madow, kadib markii horaantii sanadkan weerar lagu qaaday Wargeyska Charlie Hebdo iyo goob laga dukaameysto oo ku taal magaalada Paris, halkaasoo lagu dilay illaa 17 ruux.